Mutengo Kurarama muUkraine - Prices, tuitions, accommodation, kutakura
Kuti udzidze mutengo kurarama muUkraine ndiye danho rinokosha kuti vadzidzi vose vatorwa. Ukraine ndeimwe yakachipa nyika yokuEurope unoita kuti mumwe yakanakisisa chingaitwa kudzidza kwose muEurope. Kubva ino uchadzidza mutengo akkommodasie pamusoro, kutakura, chikafu, jira uye mukuru mutengo kurarama muUkraine. Uyewo uchadzidza mashomanana Mazano anobatsira foreing vadzidzi muUkraine. Ukrainian Munopinda Center analyzed prices in Ukraine and thats our report:
Mari uye mari muUkraine
Tisati tatanga kutaura mitengo, tinoda kukuudza nezvemari muUkraine.
National mari ndiko Ukrainian Hryvnia (OMR). 1 USD = 25 Hryvnia.
makore The National mari rweUkraine zvakasimba yakadhirika shoma aho. Pasinei chokwadi chokuti iri idambudziko guru kune nyika, chiri nani zvikuru nokuda vadzidzi vokune dzimwe nyika. Now you can get more for the same money if you took USD dollars with you.
Haukwanisi kubhadhara mune madhora kana dzimwe mari. Only the hryvnia allows for payment. All mari vatorwa inogona vakatsinhanisa panguva mabhengi, Exchange mahofisi, chitima zviteshi uye dzendege. Iyi haisi dambudziko. Bank matavi zvinhu zvinogarodyiwa. Tinoratidza kwete kushandisa mukutsinhana mahofisi panhandare yendege. The zvazvingava kupfuura zvakanaka mune mapazi mubhengi racho.
Anenge zvose mumayunivhesiti muUkraine ane pachake hostels ayo. Vadzidzi International anogona kurarama ikoko. Mutengo nzvimbo hostel kuchabvira $ 40 USD kuti $ 100 USD. In yakawanda unogo- uchararama ipapo 1 kana 2 vanogara.
Vamwe vadzidzi vanosarudza kurenda furati. Mune zvimwe zviitiko, kana vakabvarura sandara marudzi shoma, zvingava nani.
Mutengo chikuva Apartments chaizvo. It kunobva muguta, kukura mekamuri yayo nzvimbo (centre kana sabhabha).
For examle, unogona akabvarura 1 kamuri sandara nokuda $ 100 USD kure pakati. Kana kunyange pakati pamaguta diki.
3 makamuri sandara achaita mari iwe $ 600 USD and more. The cost of an apartment depends on the state of repair of the apartment and furniture. We strongly recommend students to specify the presence of furniture before renting an apartment. Most of the students live in the hostel and pay no more than $ 70 pamwedzi. Those who rents an apartment, Kazhinji kubhadhara hapana kupfuura $ 150. Zvose zvinoenderana zvaunoda.
Maguta akawanda zvinodhura vari Kyiv, Odessa. Little isingadhuri vari Lviv, Kharkiv, Dnipropetrovsk.
maguta akadai Kherson, Mykolaiv, Poltava, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi achava isingadhuri pane maguta kumusoro.
Uyewo chinokosha chinhu pamusoro zvekushandisa. kazhinji, kana uchigara yunivhesiti kuti hostel, riri pedyo uye haufaniri kushandisa zvifambiso kusvika yokudzidza. zvisinei, uchiri kuda kuenda kune rimwe divi reguta, kuenda unakirwe kana kufamba kupota nyika.
Imwe-nzira tikiti panzvimbo iyoyo senga (bhazi, chitima, pevhu, trolley-bhazi, nezvimwewo) achaita mari iwe $ 0.4 USD - $ 0.7 USD.
Monthly zvichipfuura nokuti pevhu kunotangira kubva $ 8 USD kuti $ 12 USD (pane yakatosiyana mashoma zvichipfuura).
tekisi achaita mari iwe $ 2 - $ 3 USD ndinoiitawo $ 0.45 USD nokuti 1 ? km (kunotangira kubva 5th? km)
gasorini (1 fő) achaita mari iwe $ 0.85 - $ 1.05 USD
Ukraine ndiye agrarian nyika yakawanda kubika tsika. Iva nechokwadi, kana uchida, you’ll learn a lot of interesting and tasty recipes. Here, vanhu kashoma arayire Pizza uye zvokudya kutsanya kumba. kazhinji, they buy products on the market or in stores and cook it at home themeselves. Tinokurudzira vadzidzi kuti vaite zvakafanana, zviri mari chaizvo uye hunogutsa.
vanhu Local Kazhinji zvokudya panguva misika. Zviri nyore chaizvo, asi tinoratidza vadzidzi havana kudaro pakarepo. Zvinosuruvarisa, hamuna zvakakwana ruzivo dzokugara muUkraine, you can be cheated at the market.
Zviri nani kushandisa guru chitoro muzvitoro, pano mutengo yaderera kunotenga nyore zvikuru.
Most muzvitoro nomukurumbira ndivo:
Imwe navo kwose.
OK, zvino pamusoro mitengo:
mukaka (1 fő) - $ 0.5 - $ 0.9 USD
White Bread - $ 0.35 - $ 0.5 USD
mupunga (1makirogiramu) - $ 0.8 - $ 1.1 USD
Chicken mazai (10) - $ 0.9 - $ 1 USD
mbatatisi (1makirogiramu) - $ 0.4 - $ 1 USD (hunotsamira kubvira nguva yegore)
Mvura (1.5 fő mumidziyo) - $ 0.3 - $ 0.5 USD
Dende rewaini (0.5 fő) - $ 5 - $ 25 USD
Bottle redoro (0.5 fő) - $ 0.4 - $ 1 USD.
Zviri zvishoma nhamba mishonga, asi tinofunga kuti munoona, kuti mitengo havatombokwanisi yakaderera.
Clothing uye outfits
The nharo Pfungwa. Hatigoni kutaura kuti mbatya hadzisimbori zvakachipa. We do not take into account the expensive branded items.
1 Hangaiwa Jeans rinotanga kubva $ 40 USD.
1 Summer pfeka rinotanga kubva $ 40 USD.
1 shangu rinotanga kubva $ 20 USD. Good running shoes are not cheaper than $ 100
Total mari yokurarama muUkraine pamwedzi
Ehe saizvozvo, isu tose tinoziva kuti mutengo mupenyu kunobva munhu.
Mumwe anorarama nokuzvininipisa uye akapotsa haasi mari iri varaidzo, uye mumwe munhu nguva dzose anoenda zvikuru mufashoni boutiques uye mapati.
Ngatitarisei nenhamba idzi. Shoma mubayiro muUkraine, nemurairo, ndizvo chete $ 62 USD. The average salary of an IT specialist – 325 USD ,zvokurapa mushandi - $ 250, a man who has just started his career – 100-150 madhora.
saka, Unogona kunzwa vakasununguka, mari $ 200 pamwedzi (kusanganisira rendi mukamuri panguva hostel).
Kana unozokwanisa shandisa $ 500 pamwedzi, unogona kurarama furati huru, kutenga zvinhu zvakasiyana uye kazhinji mafaro.
tapota cherechedza: Africa muripo yechikoro asingaiti kusanganisira mari iyi.